Filipina : An’Aliny Ireo Mitaky Ny Rariny Ho An’ireo Niharam-Boina Tamin’Ilay Rivodoza Haiyan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Janoary 2015 3:34 GMT
Andianà hetsika natao hoe “Global Surge” no nokarakaraina nanerana an'i Filipina sy tanàna maro manerana izao tontolo izao ho fahatsiarovana ny tsingerintaona voalohan'ilay rivodoza mahery Haiyan (Yolanda no fiantso azy ao an-toerana), sy ho fanamelohana ny “tandrametaka namoa-doza sy kolikoly” nataon'ny fitondrana taorian'ilay loza voajanahary.
Haiyan no rivodoza nahery indrindra namely ny tany teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Ireo niharam-boina, ny fianakaviany ary ireo mpanohana dia nametaka anarana ny Filohan'i Filipina, Benigno Simeon Aquino III hoe “waray pulos” na tsy mahavita azy noho ny zara fa fandraisana andraikitra nolazaina ho nataon'ny fitantànany tamin'ny fiandraiketana ny vonjy voina, ny fanamboarana ary ny ezaka fanarenana.
Olona maherin'ny 20.000 no namonjy ilay diabe fanoherana tany an-tanànan'i Tacloban raha tany an-tanànan'i Roxas, Estancia, Kalibo, an-tànanan'i Iloilo kosa no nanaovan'ny olona 20.000 hafa izany hetsika izany ary tany amin'ny nosy Panay, faritra tena voadona mafy tamin'ny fandalovan'i Hayian kosa ny ampahany sasany.
Nandeha tany amin'ny tokonam-baravaran'ny lapam-panjakana Malacanang any Mendiola ihany koa ireo sasany niharam-boina sisa velona sy ireo mpomba azy raha nikarakara karazana fivoriana tany Etazonia, Kanada, Hong Kong, ary nanerana an'i Eoropa kosa ireo vondrom-piarahamonina sy ny firaisankina Filipiana.
Nokianin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny governemantan'i Aquino tamin'ny filazana fa manampy trotraka ny faharavana naterak'i Haiyan noho ny tsy fisian'ny fanampiana sy ny drafi-panarenana maharitra, ny fanararaotam-pitantanana lazaina ho nataon'ny mpanao politika sy ireo fikambanana mpamonjy voina tamin'ireo vola natokana ho amin'ny loza ary ny toetra fitadiavana tombony amin'ny drafi-panarenana.
Natombok'ireo vondrona toa ny People Surge (Olona mirohotra), Bagong Alyansang Makabayan, ny Tambajotra Tindog , International League of People's Struggles (Ligy Iraisam-pirenena momba ny Tolom-bahoaka), ary Kalikasan People's Network for the Environment ( tambajotran'ny vahoaka Kaliksan ho an'ny tontolo iainana) ny fiofanan'ny Daluyong, tambajotra nasionaly ho an'ireo sisa velona tamin'ilay loza voajanahary. Nampiasain-dry zareo nandritra ny hetsika ihany koa ny tenifototra #RememberHaiyan.
Tezitra tamin'ny Filoha Aquino ihany koa ireo mpanao fihetsiketsehana satria tsy mba novangiany ireo sisa velona tamin'ny fandalovan'i Haiyan tany Tacloban izay nisy maty maherin'ny 2.000 nandritra ilay rivodoza. Nametra-panontaniana tao amin'ny Facebook i Renato Reyes, iray amin'ireo mpanao fihetsiketsehana :
Ny fanadihadiana antontan'isa nataon'ny Ibon Foundation, vondrona mpandinika tsy miankina, dia nahita fa tena latsaka ambany be tamin'ireo tanjona napetrany tany aloha ny fitanisana ireo zava-bita nataon'ny governemanta Aquino.
Vao tamin'ny 29 Oktobra 2014, efa ho herintaona aty aorian'ny loza voajanahary, vao natao sonia ny Drafitra ho Fanamboarana sy Fanarenana Tanteraka an'ny governemantan'i Aquino.
Nandritra izany fotoana izany dia tsikerain'ireo mpanao fihetsiketsehana tao an-tanànan'i Estancia ny fahataran'ny fanampiana ireo mponina niharan'ny fahaverezana solika tamin'ny faharendrehan'ny sambo matanjaka iray noho ny herin'ilay rivodoza Haiyan. Mponina maro no niara-nametraka fitoriana ilay orinasa tompon'ilay sambo sy ireo masoivoho hafa miankina amin'ny governemanta. Nahatonga ny fialàn'ireo mponina maherin'ny 2.000 tamin'ny vondrom-piarahamonina nisy azy satria tratran'ny entona misy poizina avy amin'ilay fahaverezana solika.
Nosoratan'ilay mpanadihady politika Benjie Oliveros tao amin'ny tranonkalam-baovaon'ny Bulatlat hoe voahelingelin'ny kolikoly faobe sy ny laharam-pahamehana dison'ny governemanta ireo ezaka fanarenana :
Nitsidika tany Tacloban ny mpanao gazety mpanadihady, Kenneth Guda, ary niresadresaka tamin'ny sasany tamin'ireo sisa velona. Nanoratra tao amin'ny Facebook izy :
Nisy taratasy misokatra ho an'ny Papa François mifandraika amin'ny famangiana nataony tamin'ny volana Janoary 2015 ihany koa nosoratan'ireo niharam-boina tamin'i Haiyan ary naparitaka tamin'ny aterineto. Mitaraina ny amin'ny mbola fijalian'ireo niharam-boina tamin'i Haiyan noho ny hanoanana, ny aretina ary ny tsy firaharahian'ny governemanta azy ireo ilay taratasy.